Kupa kwechikwereti kune 1.90% mubereko
Real Estate Listings: » Business Directory » Financial Service Providers » US » Washington » Kupa kwechikwereti kune 1.90% mubereko1
Kune ako ese echikwereti kana ekudyara zvauri kutsvaga mari yekumutsiridza zviitiko zvako kungave kuzadzikiswa kwechirongwa, kutenga imba, asi mabhanga anobvunza mamiriro iwe ausingakwanise kuzadza Kunyanya kunetseka pamusoro pako, ini ndiri Sir. Camble Anthony neni tinopa zvikwereti zve1000 zviuru makumi mashanu ezviuru kune vanhu vese vanokwanisa kuremekedza kuzvipira kwangu. Uye zvakare, huwandu hwekufarira ndewe 1.90%. Pamwe iwe unoda mari kune zvimwe zvikonzero; urikutsvaga mari yekumutsiridza zviitiko zvako kungave kwekuzadziswa kwechirongwa, kutenga imba, asi mabhanga anobvunza mamiriro iwe ausingakwanise kuzadza. Email: [email protected] Mwari ngaakuropafadze!